Idemting Deshedding Abakhiqizi & Abahlinzeki | I-China Dematting Deshedding Factory
Ngokwezifiso Heavy Duty Retractab ...
Self Yokuhlanza Slicker Ibhulashi ...
Inja Esindayo Ehoxiswayo ...
Isiphathi Sesikhwama Sezinja
Idrayivu Yesikhwama Sezinja
Ithuluzi Lokukhipha Inja Elibili Lekhanda
Ithuluzi lokuhlanza inja elinamakhanda amabili elinamazinyo asatshalaliswa ngendlela efanayo ukususa ngokushesha izinwele ezifile noma ezixegile zangaphansi, amafindo nemiphimbo yemiphumela yokuzilungisa engcono.
Ithuluzi le-double head dog deshedding aligcini ngokususa ingubo yangaphansi efile, kepha futhi linikeza ukubhucungwa kwesikhumba ukukhuthaza ukujikeleza kwegazi kwesikhumba.Amazinyo aklanyelwe ukungena ekujuleni kwengubo ngaphandle kokuklwebha isikhumba sezilwane ezifuyiwe.
Ithuluzi le-double head dog deshedding yi-ergonomic ene-anti-slip isibambo esithambile.silingana kahle esandleni. Akusekho umthwalo wesandla noma isihlakala inqobo nje uma uxubha isilwane sakho.
Ithuluzi Lokudiliza Izinja
Ithuluzi le-1.Deshedding Lezinja elinomphetho wensimbi engagqwali lifinyelela phezulu ngejazi ukuze lisuse ngokuphepha futhi kalula izinwele ezivulekile kanye ne- undercoat.it futhi ingakama ngempumelelo uboya obujulile futhi ivuse ukujikeleza kwegazi lesikhumba.
Ithuluzi le-deshedding lezinja linensimbi engagqwali egobile, iphelele kulayini womzimba wesilwane ukuthi izilwane ezifuywayo ezithandekayo zizojabulela kakhulu inqubo yokuzilungisa, efanelekayo amakati nezinja nezinye izilwane ezinezinwele ezimfishane noma ezinde.
Leli thuluzi lokususa izinja elinenkinobho encane yokukhulula, chofoza okukodwa nje ukuhlanza nokususa izinwele ezingama-95% emazinyweni, ugcine isikhathi sakho sokuhlanza ikama.
Inja Yokuchitha Blade Brush
Ibhulashi le-blade yethu yokuchitha inja ine-blade eguquguqukayo futhi ekhiwayo enezibambo ezingahlukaniswa ukudala i-rake elingu-14 intshi ende yokuchitha okwenza kube lula futhi kube lula ukuyisebenzisa.
Le bhulashi le-blade le-blade le-blade lingaphepha futhi lisuse ngokushesha izinwele zezilwane ezixegayo ukunciphisa ukuchitheka. Ungakwazi ukulungisa isilwane sakho ekhaya.
3.Kukhona okhiye esibambo, kuqinisekisa ukuthi i-blade ngeke ihambe ngenkathi uzilungisa
Ibhulashi le-blade elichitha inja linciphisa ukuchitheka kuze kufike kuma-90% ngeseshini eyodwa yokuzilungisa yemizuzu eyi-15 ngesonto.
Inja Nekati Deshedding Tool Brush
I-Dog And Cat Deshedding Tool Brush iyashesha, kulula futhi indlela esheshayo yokususa nokunciphisa ijazi lesilwane sakho sasekhaya ngemizuzu.
Le Brush Yamathuluzi Okuncisha Inja Nekati ingasetshenziswa ezinjeni noma emakati, amakhulu noma amancane. I-Our Dog And Cat Deshedding Tool Brush inciphisa ukuchitheka kuze kufike ku-90% futhi isuse izinwele eziminyene neziminyene ngaphandle kokudonswa okucindezelayo.
Leli Thuluzi LeNja Nekati Lokuhlanza Amabhulashi lixubha izinwele ezikhululekile, ukungcola kanye nemfucumfucu engutsheni yesilwane sakho ukuyigcina icwebezela futhi inempilo!
Ithuluzi Lokudonswa Kwama-Pet Undercoat Rake
Leli thuluzi lokususa ingubo yesikhumba ngaphansi kwesigqoko ibhulashi le-premium, ukunciphisa inkwethu, ukuchitha, izinwele ezihlanganisiwe kanye nengozi yezinwele ezifuywayo ezinempilo.Kungasikhipha ngobumnene isikhumba esibucayi njengoba ususa kahle omata nengubo yangaphansi.
Ithuluzi lokususa ingubo yesikhumba ngaphansi kwesikhumba lisusa izinwele ezedlulele, isikhumba esifile, kanye nenkwethu yezilwane ezifuywayo kungasiza ukukhulula ukungezwani komzimba ngezikhathi ezithile zonyaka nokuthimula kwabanikazi bezilwane abanempilo.
Leli thuluzi lokususa ingubo yangaphansi kwesikhumba ngesibambo esingasheleli, okulula ukusibamba, iharika yethu yokuzilungisa ayisihlukumezi esikhunjeni sesilwane namajazi futhi ngeke ihlise isihlakala sakho noma ingalo yakho.
Ukufuna Ibhulashi Ngezinja
1.Amabhande ahlukanisiwe waleli bhulashi lokwehlisa inja ngokuphumelelayo ukubamba amacansi anenkani, ama-tangles kanye nama-burs ngaphandle kokudonsa. ishiya ijazi lesikhumba sakho libushelelezi futhi lingalimazi, futhi linciphisa ukuchitheka okufika kuma-90%.
2.Yithuluzi elihle kakhulu lokulengisa izindawo ezinzima koboya, njengasemuva kwezindlebe nasemakhwapheni.
Leli bhulashi lokwehlisa inja line-anti-slip, isibambo sokubamba okulula liqinisekisa ukuthi liphephile futhi likhululekile lapho ulungisa isilwane sakho.